भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस - Kohalpur Trends
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस
बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ । ‘बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए,’ जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने । तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन् ।’ कुमाख को टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ । यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ ।
कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन् । त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन् । कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ ।
कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ । मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन् ।
संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने । आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला । चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा छ। यो मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको मूर्ति पनि छन् ।
दक्षिणकाली मन्दिर यहाँ केवल एक मन्दिरमात्र नभई वन भोजका लागि अत्यन्त रमणीय र मनोरञ्जनात्मक दृष्टिले भरिएको स्थल पनि छन्। राजाहरू पनि यहाँ बर्सेनि वैशाखमा आफ्नो देवाली मनाउन आउँथे । यो शान्त वातावरणमा रमेको छ। त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्छ। यो मन्दिरमा बर्सेनि हजारौं भक्तजन आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न आउँछन्। मूलत: दसैंको बेला यहाँ विशेष मेला लाग्छ ।
दसैंको नवरात्रीमा यहाँ कैयौं भक्तजनहरू हाँस, कुखुरा राँगो, बोकाको बलि दिन्छन्। यो मन्दिर धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोटले धनी छ । पहिलेपहिले यो मन्दिरमा देवीकै मुखमा नरिवल फुटाइने गरेकाले देवीका मुखाकृति केही हदसम्म बचेको छ। माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, ।
तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ!! सेयर लाईक र कमेन्ट गर्न हेला नगरौ अनिष्ट हुनसक्छ । कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ ।
मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन् । संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने । आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला ।
The put up भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै गृहमन्त्रीसँग तीन आईजीपीको छलफल
Next Next post: सरकार हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ : भीम रावल
देउवासंग सत्ता समीकरणको कुरा भएको होइन : विष्णु पौडेल
९ मंसिर, बुटवल । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग सत्ता समीकरणका…
शरणार्थीलाई नेपालमै बस्ने व्यवस्था गरौं–नेकपा सांसद
९ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले शरणार्थीलाई नेपालमा कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूले भुटान र तिब्बत…